सिनर्जी फाइनान्सको २५% हकप्रद सोमबार खुल्दै, कहिलेसम्म छ म्याद ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिनर्जी फाइनान्सको २५% हकप्रद सोमबार खुल्दै, कहिलेसम्म छ म्याद ?
काठमाडौं - सिनर्जी फाइनान्सको २५% हकप्रद सेयर बिक्री खुला हुने भएको छ । सिनर्जीले १ः०.२५ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ११ लाख ८६ हजार २२.४७ कित्ता सेयर बेच्न लागेको हो । यो हकप्रदमा असार २५ गतेदेखि साउन २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यो हकप्रदका लागि जेठ ३० गते बुक क्लोज गरिसकेको छ ।
तर, सिनर्जीको २०७४ असोज २६ गतेदेखि नै सेयर कारोबार भने रोक्का छ । बेस्ट फाइनान्सले एक्वायर गर्ने भएपछि नेप्सेमा यसको सेयर कारोबार रोकिएको हो । २०७४ असोज २५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र सिनर्जीको हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसमा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल कमलादी तथा सिनर्जीको कर्पोरेट अफिस कमलादी, काठमाडौंबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि भर्न सकिनेछ । हाल सिनर्जीको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ४४ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रदपछि पुँजी ५९ करोड ३० लाख ११ हजार २३६ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Sunday, July 08, 2018